Tora zvakanakisa zvepasirese nyika neYammer kune rako bhizinesi
Mugovera, June 23, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tisati taita hurukuro yedu neChishanu naHarold Jarche, ndakanga ndisati ndambonzwa nezwi iri kushanda. Kubva munaGunyana apfuura, yedu inbound yekushambadzira agency yakave yakazivikanwa ROWE kubasa. ROWE ndeyeMhedzisiro Chete Nharaunda Yekushandira ... iyo mune iyo vashandi vanopihwa simba rekushanda sezvavanoda chero bedzi izvo zvinodiwa zvebasa zvapera.
Seboka diki, iro dambudziko rimwe ratinaro neROWE kutaurirana. Vamwe vedu vanopindura neemail, vamwe nefoni, uye vamwe kwete zvachose (seni!). Pandinenge ndakakotamisa musoro pasi pabasa rangu, ndinovenga zvechokwadi kukanganiswa. Asi izvo hazvina kunaka kune vatengi vangu kana vatinoshanda navo… avo dzimwe nguva vari kuyedza kunditevera.
David akacherekedza nyaya nemamwe masangano anorasa kugadzirwa kubva kumaemail akawandisa uye misangano yakawandisa… kusatendera vashandi kuti vawane mabasa aripo. Vati mamwe emasangano atendeukira kuWorkstreaming. Zvichitaurwa zviri nyore, Workstreaming inopa nzira yekutaurirana isingavhiringidzi kune vashandi asi ichiri kubvumira avo vari padhuze newe kuti vanzwisise zvauri kushanda, nguva yaungangoda rubatsiro, uye nguva yekutarisira mhedzisiro. Zvinoita sekudaro Yammer inogona kunge iri chishandiso chikuru cheichi!
Yammer iri nyore kushandisa asi ine simba micro-blogging application inobatanidza vanhu uye zvemukati panguva nenzvimbo. Inoshanda zvakafanana neFacebook kana Twitter, mutsauko uripo wekuti nepo Facebook ichipa ruzivo kune veruzhinji, Yammer inoshanda chete kune bhizinesi, ichibvumira mabhizinesi kugadzirisa mushandisi-centric social network software kuti ibatanidze vashandi, vechannel vanobatirana navo, vatengi uye vamwe mune kukosha. cheni.
Svomhu yekudyidzana yepakati senge Yammer inopa yakawanda yekubatsira kukambani. Inobata uye inopa simba kuvashandi, inomhanyisa mashandiro ebasa, inovandudza kugadzirwa uye inowedzera hunyanzvi. Uye mhedzisiro yacho yave pedyo. Semuenzaniso, Yammer inopa chishandiso chinowirirana uye chinoshanda chekubatanidza tarenda uye matekinoroji akapararira pasi rese kune rekutengesa uye rekushambadzira timu, ichivabvumidza kuti vapinde mumazano uye kutanga mishandirapamwe zvisina musono.
Chinhu chakanyanya kunetsekana nezve mawebhusaiti ekubindirana ndeyekuchengetedza data Iine Yammer chete poindi yekusiyanisa (pamusoro peFacebook nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji dzewebhu, ndiko kuti) kuve kuvanzika uye kuchengetedzeka kwedata, portal inoenda mamaira ekuwedzera kuti ive nechokwadi chekuchengetedza kwepamusoro-giredhi. Yammer inosanganisa ongororo dzekuchengetedza mune dhizaini, prototype, uye zvikamu zvekutumirwa. Zvese zvinongedzo zvinopinda kuburikidza neSSSL / TLS, uye dhata inoyerera nepasi zvakadzika zvine musoro firewalls kudzivirira kuputika pamataneti. Iwo webhu anoshanda maseva anogara mumuviri uye zvine musoro akapatsanurwa kubva kumaseva edata. Idzi dziviriro, pamwe nekumwe kumhanya kweiyo mill yekuchengetedza mashandiro senge kutenderera wachi vhidhiyo yekucherechedza, biometric uye pini yakavakirwa makiyi, yakasimba vashandi kuwana kudzora, yakadzama yevashanyi yekupinda matanda, kusaina kamwe-kusaina uye kuchengetedza password password, kusimbiswa kwakasimba uye zvimwe zvinovimbisa pamusoro. notch chengetedzo.
Dzokera Kumabasa Ekushandira. Tichifunga nezvezvinetso zvezvakasiyana zvedu zvekutanga, marongero, nzvimbo nemashandiro ebasa… kushandisa Yammer inogona kunge iri nzira yakanaka yekuti isu tese tirambe tichiteedzana. Panzvimbo pekuti ini ndifonere mushambadzi wangu, ndinogona kungotarisa Yammer ndigoona zvaari kuita kana paanogona kuwanikwa! Izvi hazvisi zvekubatsira kune bhizinesi diki ... fungidzira kuwedzera kutaurirana uye kudzikisira ruzha bhizinesi rinogona kunge riinewo!
Yammer zvakare ane zvese zviri zviviri desktop uye nharembozha inowanikwa, Skype kusangana, uye tani yezvimwe zvinhu.
Tags: kutaurirana munharaundakushandayammer
Kufunga nezve Kushambadzira neeEbook?
Nhau dzinonakidza nhasi kuti Microsoft yakatenga Yammer. Ndinofunga idanho rakakura!
Ndinofanira kutaura - ndiri kunakidzwa chaizvo nekushandisa chishandiso ichi. Chandaida kwaiva kusunda chete. Inoderedza maemail, inochengeta vaunoshanda navo ruzivo, uye inochengeta mapurojekiti mukutarisa. Zvakafanana neFacebook, asi zvebasa chete!